Nayakhabar.com: ‘वर्षमा सय रुपैयाँ खर्च गरे मिर्गाैलाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ’
‘वर्षमा सय रुपैयाँ खर्च गरे मिर्गाैलाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ’
काठमाडौैं हाँडीगाउँका सन्दिप जोशीले आफ्ना बुबालाई मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानु भयो । अस्पतालमा सुरुमा उहाँले आफ्नै खर्चमा बुबाको मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुभयो ।
एकदुई पटक आफ्नै खर्चमा उपचार गरेपछि मात्रै उहाँलाई थाहा भयो कि मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क हुन्छ भन्ने । त्यसपछि उहाँले आफ्नो वडाबाट कागजात बनाई मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क गराउनुभयो ।
के गर्‍यो भने मिर्गौलाको रोगबाट बच्न सकिन्छ त ? डा. काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘वर्षमा एक पल्ट मात्रै भए पनि स्वास्थ्य जाँच गरौँ । यसो गर्दा धेरै खर्च पनि लाग्दैन । अनि स्वास्थ्यमा अरु रोगको संक्रमण छ छैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ । जसले गर्दा रोग लाग्नु अगाबै सावधानी अपनाउन सकिन्छ र रोग लाग्न पाउँदैन ।’
मिर्गौलाको परीक्षण गर्दा पिसाब र रगतको जाँच गराउनु पर्छ । सरकारी अस्पतालमा गराउने हो भने धेरै लागे एकसय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनि निजी अस्पतालमा जचाए डेढ देखि दुईसयमा परीक्षण हुन्छ । वर्षमा एक दुई सय खर्च गर्न गाह«ो र अल्छी मान्दा लाखौँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।